Chii chinonzi ICEX | Economy Finance
Encarni Arcoya | 02/01/2022 19:40 | Yakagadziridzwa ku 02/01/2022 19:59 | Negocios
Zvinogoneka kuti, pane imwe nguva, wakambonzwa nezvazvo Institute of Foreign Trade, inozivikanwa zviri nani seICEX. Asi chii chinonzi ICEX? Ndeapi mabasa ane? Inowanikwa kupi?
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyi yenyika institution yakatsaurirwa kune ese kusimudzira nekusimudzira makambani eSpanish, saka tinokusiira iwe ruzivo rwese rwaunoda kuziva nezvazvo.
1 Chii chinonzi ICEX
1.1 Iyo ICEX yakarongeka sei
2 ICEX inoshanda
3 Ndezvipi zvipo, zvibvumirano, zvidzidzo ... zvaunazvo
3.1 The kuvhunduka kuronga kutsigira internationalization
Iyo ICEX ndeye sangano rine basa rekusimudzira makambani eSpanish. Asi hazviiti padanho renyika, asi pasi rose, sezvo chainoda ndechekuti makambani aya akwanise kukwikwidzana nemamwe makambani ekunze nenzira yekuti anoda kuapa mbiri kuitira kuti awane mari yekunze iyo, nenzira isina kunanga. zvakare zvine chekuita pane zvakanaka zveSpain.
Iri sangano rakagadzirwa muna 1982, kunyange zvazvo rine zita reNational Institute for Export Promotion (INFE), rakachinjwa kuva razvino muna 1987. Uye rakaenderera mberi kubva panguva iyoyo. Uye zvakare, haina kungoenderana nekusimudzira makambani, asi ine basa rekuita kuti brand yeSpain izivikanwe pasi rese. Izvo zvinoenderana neBazi reIndasitiri, Commerce uye Tourism, uye inotungamirwa kuburikidza neMunyori weNyika weCommerce.
Nguva mutumbi mukuru uri muMadridChokwadi ndechokuti unogona kuwana dzimwe nhume munyika yose. Kunyangwe kunze kwenyika kune kuvepo, mumaguta akadai seLondon, Casablanca, Beijing kana New Delhi. Inogona kunyange kuwanikwa mumutambo weChipiri Hupenyu (pazvitsuwa zveICEX).
Nezve mutemo wayo, izvi zvinotemwa ne Royal Decree 1636/2011, yaNovember 14, iyo inobvumidza iyo Statute yePublic Business Entity Spanish Institute of Foreign Trade (ICEX), uko mirairo yese inotonga basa resangano iri inowanikwa.
Iyo ICEX yakarongeka sei
Zvino zvaunoziva kuti ICEX chii, unofanirwa kuziva kuti inogadzirwa nei. Kazhinji, Iine 31 territorial uye matunhu madhairekitori, pamwe neanopfuura zana ehupfumi nemahofisi ekutengeserana kunze kweSpain.. Izvi zvinogona kushandiswa kukumbira ruzivo asiwo kukupa zano pamusoro pezvinhu zvine chekuita nekutengesa kunze kwenyika uye kuita kunze kwenyika, pamwe nezviitiko, hurukuro, kudzidziswa, nezvimwe. iyo inobatwa.
Mutungamiri wayo anogara ari Secretary of State for Tourism and Commerce, nepo iine Executive Directorate, inotungamirwa neMutevedzeri weMutungamiriri; uye General Directorates maviri, Promotion Directorate uye Information uye Investment Directorate.
Pamusoro pebasa rinoitwa nemakambani ari kunze kwenyika senge neSpain brand, ICEX zvakare iri kutungamira kushandira pamwe nedzimba dzekutengeserana, nemakambani uye nemasangano ematunhu nechinangwa chekusimudzira kudyidzana kwenyika dzeSpain uye zvigadzirwa zvenyika. Nechikonzero ichi, zviri nyore kukumbira zano kubva kumakambani kuti aite nyika dzese, mumashopu kana hurukuro kubatsira kusimudzira bhizinesi, kana kugadzira zvirongwa zvekudyidzana nedzimwe nyika.
Muzhinji, Zvinangwa zvikuru zveICEX ndezvi:
Gadzira uye ita zvirongwa zvekusimudzira zvekutengesa. Izvi kuitira kushambadza mabhizinesi uye zvigadzirwa kunze kweSpain, mumisika yekunze.
Gadzirira uye ugoparadzira ruzivo rwezvigadzirwa zveSpanish mumisika yekunze, ndiko kuti, kupa kuoneka kurudzi rweSpain kune dzimwe nyika.
Kurudzira kudzidziswa kwehunyanzvi kwemakambani uye nyanzvi dzezvitima. Mune mamwe mazwi, inova institution kwaunogona kudzidza nezve internationalization nyaya kuti ubudirire kana zvikaitwa.
Kurudzira mari, kushandira pamwe kana mapurojekiti ekuita maindasitiri, kunyanya kana iri misika yekunze. Ndokunge, inotsvaga kutsigira iwo makambani anotora danho rekuita nyika uye anovabatsira nekuita, kudyara uye kubatana.
Mamwe mabasa izvo zvaunogona kuwana kubva kuICEX ndezvi:
Kukwezva mari yekunze. Makambani anoda kuisa mari muSpain, angave mumabhizinesi, makambani, zvigadzirwa, nezvimwe.
Rayirai mazano emakambani anoda kutengesa kunze kwenyika kana kuti kunze kwenyika. Izvi zvinosanganisira kudzidziswa nezve kunze kwenyika uye nyaya dzetsika, pamwe nemutemo wenyika dzaunoda kushanda nadzo.
Rongedza maforamu uye misangano yekudyidzana kwebhizinesi, yenyika nekunze.
Ndezvipi zvipo, zvibvumirano, zvidzidzo ... zvaunazvo
Sezvatakambokuudza, rimwe remabasa eICEX kutsigira nekusimudzira kusimukira kwemakambani ari kunze kweSpain. Uye izvi zvinogona kuwanikwa kuburikidza nezvipo nezvibvumirano zvakapihwa neICEX pachayo. Kunyanya, tinogona kuwana mitsara mitatu yakasiyana:
ICEX-Inotevera. Ivo rubatsiro rweSpanish SMEs vanoda kuita nyika, vachivatsigira mumatanho akasiyana ayo anoumbwa. Turnover haigone kudarika zviuru zana zvemaeuro pagore uye mukudzoka iwe unogamuchira zano, kuvandudzwa kwehurongwa hwepasi rose, kubhadhara mari (kutarisa, kukwidziridzwa kwenyika, kusimudzira, kuita kondirakiti ...).
Internationalization scholarship zvirongwa. Kana iri yekupa rubatsiro rwemari kuti uwane rutsigiro mumutengo wekudyidzana nedzimwe nyika.
Zvirongwa zvekuisa mari yemakambani ekunze (inonyanya kutariswa tekinoroji uye R&D zviitiko). Muchiitiko ichi, makambani ekunze ayo, kuburikidza neICEX, anosarudza kuisa mari mumakambani eSpanish kuti avabatsire nekusimudzira hupfumi kuti vavandudze zvigadzirwa zvavo uye / kana masevhisi, kana kuita chinhambwe chekutengesa kunze uye / kana kudyidzana nedzimwe nyika.
The kuvhunduka kuronga kutsigira internationalization
Nekuda kwedenda reCovid-19 rakatanga, ICEX yakagadzira hurongwa hutsva hwekubatsira, chirongwa chekuvhundutsa chekutsigira kudyidzana nedzimwe nyika, nechinangwa chekuchengeta kutengeswa kunze kwenyika kwanga kuchishanda panguva iyoyo.
Kuti vaite izvi, vakagadzira matanho ane chinangwa chekugadzirisa matambudziko kana kumiswa kana kumira zvachose kwekutengesa kunze kwenyika. Izvi zvakatarisana nemakore 2021 uye 2022.
Nenzira iyi, tinogona kutaura kuti kana uine kambani inoda kutengesa kunze kwenyika kana kutengeserana kune dzimwe nyika, chinhu chakanaka chekuita kuenda kuICEX kuti uwane mazano uye kuona kana iwe ungawana rubatsiro rwekuita kuti maitiro ave pamutemo. , yakarurama uye yakanakisa inogoneka kune muzvinabhizinesi. Zvakajeka kwauri kuti ICEX chii?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » Chii chinonzi ICEX
Ndeipi mari yemukana